अमेरिकामा बसिरहेकी महिलालाई किम जोंग उनले मारिदिने त्रास! – हाम्रो देश
अमेरिकामा बसिरहेकी महिलालाई किम जोंग उनले मारिदिने त्रास!
एजेन्सी : उत्तर कोरियाकी मानवअधिकारकर्मी येनोमी पार्कलाई उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोंग उनले आफूलाई मार्न सक्ने डर छ । तर, उनी किमविरुद्ध आवाज उठाइरहन्छिन् र उत्तर कोरियाको प्रोपोगान्डाबारे विभिन्न खुलासाहरु गरिरहन्छिन् । पार्कले सन् २००७ मा मानव तस्करहरुलाई पैसा दिएर उत्तर कोरियाबाट भागेकी थिइन् । तस्करहरुले पार्कलाई अमेरिका पुर्याएका थिए ।
त्यतिबेला किम जोंग उनले पार्कका क्यान्सरसँग जुधिरहेका पितालाई भयानक कन्स्ट्रेसन क्याम्पमा थुनेका थिए । त्यसपछि पार्क देशबाट भागेकी थिइन् । पार्क अहिले शिकागोमा बस्छिन् र किमबारे खुलासाहरु गरिरहन्छिन् । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममार्फत किम जोंग उनले आफूसँग २ हजार यौनदासी राख्ने खुलासा गरेकी छिन् । अमेरिकामा बस्दा पनि आफूलाई किमले मार्न सक्ने डर भने पार्कलाई लागिरहन्छ ।
पार्कले कोरोनाकालमा किम जोंग उन २ हजार यौनदासीसँग मस्ती गरेर बसेको दावी गरेकी छिन् । पार्कका अनुसार किम कोरोनाकालमा पृथ्वीको स्वर्ग भनिन् वान्सन कम्पाउण्डमा क्वारेन्टाइन बसेका थिए । पार्कका अनुसार यी महिलाहरुलाई प्लेजस स्क्वाड भनिन्छ र यी महिलाहरु किम जोंग उनसहित अन्य हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरुको मनोरञ्जनको लागि राखिएका छन् ।
पार्क अहिले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा जाँदा साथमा सुरक्षा गार्ड लिएर जान्छिन् । उनले बेलायती अखबार द सनसँग कुरा गर्दै भनिन् ‘म विगत केही वर्षदेखि किम जोंग उनको टार्गेटमा छु । मलाई सधैं डर लागिरहन्छ कि उनका मान्छेले मलाई खोजेर मार्न सक्छन् । मलाई धम्की आइरहन्छ र मेरो सिस्टम पनि कैयौं पटक ह्याक भइसकेको छ । उत्तर कोरियाले मलाई सार्वजनिक रुपमा देशको दुश्मन घोषणा गरेको थियो किनकि म र मेरी आमा त्यो देश छाडेर भागेका थियौं ।’
पार्कका अनुसार उत्तर कोरियामा उनको परिवारका तीन पुस्तालाई सजाय दिइँदैछ । उनका उत्तर कोरियामा रहेका आफन्तहरु कि मारिइसकेका छन् कि उनीहरुलाई जेलमा हालिएको छ । यसअघि उत्तर कोरियाली नेता किमका दाजु किम जोंग नामको २०१७ मा मलेसियाको विमानस्थलमा हत्या भएको थियो । नामले उत्तर कोरियाको सत्तामा आफ्नो दावी गर्न सक्ने हुनाले किमले नै उनलाई मारेको विश्वास गरिन्छ ।
पार्कले भनिन् ‘जमाल खशोग्गीजस्ता प्रतिष्ठित पत्रकारलाई टर्कीजस्तो देशमा मारिएको थियो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि तानाशाह अन्य देशमा पनि विरोधीको हत्या गर्न सक्छन् र त्यसको सजाय पनि पाउँदैनन् । यस्तोमा मलाई आफ्नो जीवनको चिन्ता भइरहन्छ ।’